IViolet House Hostal Room 1 kaRudy Carralero
Igumbi lakho lokulala e igumbi nesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguReyna
Ifumaneka entliziyweni yeLas Tunas, le ndlu yeendwendwe imangalisayo iyahlukaniswa nomgangatho weenkonzo zayo, ukhuseleko kunye nentuthuzelo.
Ifakwe kwiimitha ezimbalwa ukusuka eParque Vicente Garcia, kufutshane neendawo ezikhangayo eziphambili zaseLas Tunas, le ndlu yeendwendwe imangalisayo yahlulwa ngomgangatho weenkonzo zayo, ngenxa yamava abanzi kwicandelo. Kwakhona kwiViolet House siye sacinga nakwezona nkcukacha zincinci, ngenjongo eyodwa yokwenza ukuba uzive uphathwa njengeyona hotele ibalaseleyo, kunye neempawu zethu eziphambili zokuba ngasese, ukhuseleko kunye nokukhululeka.
Vula iiyure ezingama-24 ngosuku, ungafika eViolet House nangaliphi na ixesha lonyaka, eya kwamkelwa ngobubele obubonakalisa kuthi kunye nesithembiso sokuba siya kuzama ukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo.
Amaziko ethu anentuthuzelo efunekayo ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava angenakulibaleka, kuba oku kuye kwahombisa, umoya opholileyo kwaye uhonjiswe ngoncasa obalaseleyo kwaye ulungiselele yonke into eyimfuneko ukuze uzive wanelisekile.
Ngaphandle kwayo yonke into echaziweyo ukuza kuthi ga ngoku, iViolet House ibonakalisa indawo yokuphumla kunye nokutshaya, i-wifi, iJacuzzi, indawo yokuqubha kunye nendawo yokupaka eyaneleyo.
Kuya kufuneka wazi nokuba sikulungele ngokugqibeleleyo ukufumana kwiindwendwe zethu kubantu abakhubazekileyo, abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya.
4.58 ·Izimvo eziyi-19
Sisembindini wesixeko, sisondele kakhulu kuzo zonke iindawo zokuzonwabisa zaseLas Tunas, ngaphandle kweyona ndawo ithuleyo nekhuselekileyo yesixeko. Sinayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhumbuleke.
Umbuki zindwendwe ngu- Reyna
Ngexesha lokuhlala kwakho, siya kukunceda kwaye sikuxhase kuyo yonke into oyifunayo, sibabonelela ngalo lonke uthando lwethu, ukwenza ukuhlala kwakho kwindawo yethu ibe yindawo ekhethekileyo nengenakulibaleka. Sikwabonelela ngeeklasi zokudanisa ngeenkonzo, ezifundiswa ngumfundisi-ntsapho owaziwayo kumazwe ngamazwe uRudy Carralero, onamava abanzi okusebenza e-Itali, eSpain, eJamani nakwamanye amazwe kwihlabathi liphela.
Ngexesha lokuhlala kwakho, siya kukunceda kwaye sikuxhase kuyo yonke into oyifunayo, sibabonelela ngalo lonke uthando lwethu, ukwenza ukuhlala kwakho kwindawo yethu ibe yindawo ekh…